यौनशक्ति बढाउनेका लागि माछा फलदायी - नेपालबहस
यौनशक्ति बढाउनेका लागि माछा फलदायी
| १८:२३:०६ मा प्रकाशित
१४असोज, काठमाडौं । मासुभन्दा पनि माछा खानु स्वास्थयका लागि निकै नै लाभदायक हुन्छ । रातो मासु पचाउनका लागि झन्डै ३२ देखि ३६ घण्टा लाग्छ । तर, हामीले खाएको माछा पचाउनका लागि २ देखि ३ घन्टा मात्र लाग्ने भएकोले मासुभन्दा पनि नियमित माछा खानु अति स्वस्थ्यकर मानिन्छ ।
खसी, कुखुरा, भैँसी, राँगा र बंगुरको मासु तथा अन्य जन्तुको तुलनामा माछामा केही मेनेरल्स र प्रोटिन अलि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । नियमित रूपमा माछा खानाले मानिसको मस्तिष्कलाई सधैं ताजा र तेज राख्नमा मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ । माछा खनाले धेरै हदसम्म शरीरिक वजन घटाउन पनि मद्दत गर्छ ।
माछामा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन ‘डी’ र क्याल्सियम पाइने भएकोले यसको सेवनले शरीरका हड्डी तथा दाँतलाई मजबुत बनाउँछ । शरीरको खराब कोलेस्टेरोल घटाएर मुटुसम्बधी रोग लाग्नबाट बचाएर हार्टयाट्याक हुन दिदैन । यसले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रन गरेर कलेजोमा लाग्ने विभिन्न रोगबाट बचाउनका साथै क्यान्सरबाट छुट्कारा पाउन पनि सहयोग पुर्याउने गर्छ ।
ठिक्क मात्रामा नियमित माछाको सेवन गर्ने हो भने यसले आँखाको भिजन बढाउनुको साथै आँखा तथा छालालाई सधैं स्वस्थ्य राख्न मद्दत गर्छ । माछा या माछाको फूल खानाले छालासम्बन्धी सम्पूर्ण रोग निको हुनुका साथै डन्डीफोर आउने सम्भावना पनि कम भएर जान्छ ।
नियमित माछा खानाले जीवनबाट नैराश्यता हटाएर खुसी हुने, शरीरमा उर्जा उत्पन्न गराएर काममा फूर्ति ल्ययेर दैनिक कार्यमा परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्छ । माछा खाने गर्नाले यौन क्षमता बढाउने र डिप्रेसनबाट समेत मुक्त भइ निद्रा अत्यन्त राम्रो लाग्ने गर्छ ।
साउदीमा तीन महिनामा कोमामा पुगेर बाँचेका भुजेलको उद्धार २५ मिनेट पहिले
श्रीमान हत्या गरेको अभियोगमा महिला पक्राउ ३७ मिनेट पहिले
नवलपुरको बुलिङटारमा जीप दुर्घटना: एकको मृत्यु, १६ घाइते ४७ मिनेट पहिले
वेटरदेखि होटल मालिकसम्म बनेका कृष्ण १२ घण्टा पहिले
‘आँधी तुफान २’ को छायांकन सुरु ८ घण्टा पहिले
राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता आब्हान १२ घण्टा पहिले
सर्वसाधारणले अर्को साता सिईडीबीकाे आईपीओ भर्न पाउने, कति दिने आवेदन ? ११ घण्टा पहिले
अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता गरिएपछि सुरक्षाको चर्चा ७ घण्टा पहिले
आजदेखि पशुपति क्षेत्रका सबै मन्दिर बन्द ११ घण्टा पहिले
नेपालगञ्जमा प्रभावकारी बन्दै बन्दाबन्दी १ दिन पहिले
आज चैते दशैं, शक्तिपीठहरुमा भीडभाड नगर्न सरकारको आदेश ४ दिन पहिले
अपाङ्ग श्रीमान हेरचाह गर्ने नै आगोमा जलेपछि ६ घण्टा पहिले
जनरल ईन्स्योरेन्सका संचालक दीपेन्द्र अग्रवाल निलम्बित, सम्पति शुद्धीकरणले पनि थाल्यो अनुसन्धान ५ दिन पहिले
पाँच लाखको एक्सरे मेसिन प्रयोगविहीन, सेवाग्राही मार्कामा ४ दिन पहिले
आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्न नपाएपछि सेरम इन्स्टिच्यूट समस्यामा २ हप्ता पहिले
कुमाल गाउँका किसानलाई मकै छर्न चटारो ३ दिन पहिले
रामनवमीकाे अवसरमा लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा भक्तजन २ दिन पहिले
१५ वर्षीया सालीलाई जबरजस्ती करणी गर्ने भेनाजु जेल चलान १ हप्ता पहिले
प्रहरीको चेतनामूलक घुम्ती प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न ७ महिना पहिले
नेपालमा संक्रमण देखिएको एक वर्षपछि कोभिड–१९ खोप ! ३ महिना पहिले
हिउँदे अधिवेशन प्रादेशिक राजधानी देउखुरीमा राख्नेबारे गृहकार्य शुरु ६ महिना पहिले